ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာတောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ခရီးသွားပုံရိပ်တွေတောက်လျှောက်တင်နေတဲ့ ယဉ်လတ် – Maythadin
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာတောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ခရီးသွားပုံရိပ်တွေတောက်လျှောက်တင်နေတဲ့ ယဉ်လတ်
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း လုံးဝမပါဝင်ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေပါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပြန်ပဲအေးဆေးစွာနဲ့နေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ယဉ်လတ်ဟာဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူအနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ MWD ချန်နယ်အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်နော်။ သူတင်တဲ့ပုံတွေ အောက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက ဝိုင်းပြီး ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါပစေ ယဉ်လတ်ကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုက် ပါဘူးတဲ့နော်။
” ရေငုပ်တဲ့အတွေ့ကြုံတွေ .. ကျောက်တောင်ပေါ်တွယ်တက်ခဲ့တာတွေ သင်ယူရရှိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဘဝအတွေ့ကြုံတွေပါပဲ . .ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အခက်ခဲတွေ အကောင်းအဆိုးတွေတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ အတူတူဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေဟာလည်း တစ်သက်လုံး သတိရစရာတွေဖြစ်နေမှာပါ
#SoulHealing #Dive ..#Adventure & Survive ! Beinga#diver forawhile .. .. #Life #experience #YinLet #ယဉ်လက်#YL” လို့ သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် တင်ထား ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယဥ္လတ္ကိုေတာ့ အားလုံးသိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ေနာ္။ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာလည္း လုံးဝမပါဝင္ပဲ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ပရိသတ္ေတြ ဘယ္လိုပဲ ေဝဖန္ေနပါပေစ လုံးဝကို မတုံ႕ျပန္ပဲေအးေဆးစြာနဲ႕ေနေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ယဥ္လတ္ဟာဆိုရင္ စစ္တပ္ေထာက္ခံသူအေနနဲ႕တင္မဟုတ္ဘဲ MWD ခ်န္နယ္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ရိုက္ကူးထားပါေသးတယ္ေနာ္။ သူတင္တဲ့ပုံေတြ ေအာက္မွာလည္း ပရိသတ္ေတြက ဝိုင္းၿပီး ေျပာထားၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေနပါပေစ ယဥ္လတ္ကေတာ့ လုံးဝကို ဂ႐ုမစိုက္ ပါဘူးတဲ့ေနာ္။
” ေရငုပ္တဲ့အေတြ႕ႀကဳံေတြ .. ေက်ာက္ေတာင္ေပၚတြယ္တက္ခဲ့တာေတြ သင္ယူရရွိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတေတြ ဟာ အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ဘဝအေတြ႕ႀကဳံေတြပါပဲ . .ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အခက္ခဲေတြ အေကာင္းအဆိုးေတြတစ္ဖြဲ႕လုံးနဲ႕ အတူတူျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ အမွတ္တရေတြဟာလည္း တစ္သက္လုံး သတိရစရာေတြျဖစ္ေနမွာပါ
#SoulHealing #Dive ..#Adventure & Survive ! Beinga#diver forawhile .. .. #Life #experience #YinLet #ယဥ္လက္#YL” လို႔ သူ႕ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ တင္ထား ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
ဘယ်သူမှမသိအောင် အိမ်ပြန်လာပီး သားလေးကိုတယုတယနမ်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်း